Home STARS EUROPEAN Ny tantaram-piainan'i Iago Aspas momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Septambra 30, 2018
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "El Turco". Ny tantaranay momba ny tantaram-pahaterahana Iago Aspas sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra fitantarana feno momba ireo hetsika mahavariana avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ny tantaram-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana. Ankoatr'izany, tsy dia fantatra loatra momba azy ny toe-javatra tsy fantatra.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny tanjony-manatsara ny fahaiza-manao. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Iago Aspas izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Fiainana tany am-piandohana sy tamina fianakaviana
Manomboka eo, ny anarany feno dia Iago Aspas Juncal. Iago Aspas dia teraka tamin'ny andro 1st of August 1987 ho an'ny reniny, María Juncal González sy ny rainy, Urbe Aspas Martínez. Teraka tao amin'ny tanàna misy an'i Moaña, Espagne fantatra amin'ny morontsiraka sy tora-pasika mahafinaritra.
Momba ny niandohany: Raha jerena avy amin'ny endriny, dia mety ho hitan'ny iray fa ny iago dia manana endrika mifangaro amin'ny endrika Espaniola sy Arabo. Avy amin'ny fomba fijerin'ny Espaniola, dia mitovy amin'ny Andrés Iniesta izy.
Araka ny tatitra iray azo itokisana, ny fianakavian'i Iago Aspas dia avy amin'ny taranaka arabo avy any Libanona. Izany dia manazava ny antony iantsoan'ny mpankafy baolina azy matetika "El Turco".
Iago Aspas, dadan'i Urbe Martínez, dia niaraka niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny tany Espaina fony kely. Ankehitriny, ny mpikambana tsirairay ao amin'ny ankohonany, anisan'izany Iago dia lasa teratiora madio ao Moaña any Espaina.
Ny ray aman-drenin'i Iago Aspas, Martínez sy María dia mirehareha amin'ny zanany efatra manokana indrindra i Iago izay samy nanaiky hiatrika ny lalao baolina kitra avy amin'ny taonany.
Niresaka momba izany i Iago Aspas nihalehibe tamin'ireo rahalahiny telo mianaka avy any ankavia; I Jonathan, i Pablo sy Urbe, izay zokiny indrindra tamin'ireo rahalahy. Ny rahalahy rehetra dia nanomboka ny lalao baolina kitra tamin'ny fahazazany amin'ny baolina kitra CD Moaña.
Nifarana tamin'ny lalao baolina kitra tao amin'ny Ligin'ny Cyprus i Jonathan. I Urbe dia mpilalao baolina kitra ho an'ny Alondras, ekipa baolina kitra any Cangas ao amin'ny vondrom-piarahamonina tsy miankina ao Galicia, Espaina. I Urbe dia misotro ronono ary miasa toy ny mpikarakara laboratoara sy mpikaroka. Pablo izay zandriny indrindra dia niezaka nifantoka tamin'ny baolina kitra saingy tsy afaka nanamboatra azy io ho lasa matihanina.
Iago koa dia nihalehibe niaraka tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, Aitor izay nitana ekipa kely tao amin'ny faritra niaviany. Na ny dadatoany Cristobal Juncal aza dia nilalao tamin'ny sokajin'ny Celta. Na dia teo aza izany rehetra izany, ny iray izay nanana ny toetra tena izy dia i Iago Aspas.
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Miorena amin'ny asa
"Ilay zazalahy kely an'i Moaña" araka ny nambarany marina Nandritra ireo taom-pandringany, niaraka tamin'ny Moaña academy dia afaka nanatrika fitsapana tao amin'ny Akademia Celta, ilay klioba baolina kitra espaniola lehibe mipetraka ao Vigo, Galicia.
Iago dia tsy maintsy nandeha an-tongotra 15 kilometatra manomboka ny tranony mankany Vigo hanatrika ny fizarana baolina kitra. Fotoana fohy no nokolokoloin'ny Akademia Celta de Vigo momba ny fisamborana ireo ankizy ao amin'ny sokajin-taona misy azy.
Iago Aspas taorian'ny fahatongavany tao Vigo dia nihaingo ny fahadisoam-panantenany raha niaraka tamin'ny ray aman-dreniny sy ny dadatoany niaraka taminy izy ireo fa nilaina tamin'ny zaza teraka tamin'ny taona 1986 ny fitsapana baolina kitra.
Ao amin'ny teniny;
"Tsy afaka nijanona intsony aho. Resy lahatra aho fa tsy maintsy nody tany an-trano aho. Na izany aza, i dadatoan'i Cristobal Juncal dia nandresy lahatra ahy mba handainga azy ireo hoe: .. "Lazao azy ireo fa ianao no 86 ary izany no izy." Ka mandainga amin'izy ireo aho ary nividy izany. "
Ny teknisiana momba ny academy Celta de Vigo dia afaka mijery ny tarehin'i Iago ary naharesy lahatra fa nanana ny porofo rehetra ilaina izy hamela ilay zazalahy kely handalo ilay fitsarana. Iago Aspas dia nitady taona iray lehibe noho ny fahasarotany. Tsy vitan'ny hoe tsy nahitam-bokatra ny fahaizany havia.
Farany, niatrika ny fitsapana henjana i Iago Aspas saingy tsy nomena avy hatrany ny vokatra. Tonga tsy nomanina izy io, izy no fotoana voalohany nilalaovany baolina kitra tao anaty sainam-pandrefesana na kanto. Raha tokony ho avy amin'ny bootim-piantohana tiany, Iago Aspas dia nitondra baka mangotraka izay nahatonga azy nianjera tamin'ny tany tsy tapaka. Nody izy ary tsy resy lahatra fa handalo ilay fitsarana.
Nahagaga fa taorian'ny antsasak'adiny taorian'ny nodiany niaraka tamin'ny ray aman-dreniny sy dadatoany, dia nitazona ny telefaona. Fiantsoana biraon'ny Celta no nantsoina ary nilaza tamin'ireo ray aman-dreniny fa ny zanany lahy dia nokaramain'ny ekipa tanora. Izany dia namela ny fianakavian'i Iago Aspas feno fifaliana sy fahasambarana.
Na izany aza, tsy nieritreritra zavatra iray izy ireo. Ny zava-misy tokony hanaporofoana ny porofo amin'ny vanim-potoanany amin'ny fotoana handraisany azy amin'ny fisoratana anarana ara-dalàna. Izany no fiandohan'ny tahotra vaovao izay tsy maintsy hitodihan'ny fianakavian'i Aspas.
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Fahatelo sy fahatokiana
Ny ray aman-drenin'i Iago Aspas, Martínez ary María dia mbola nanana ny tahony rehefa nanomana ny handao ny tokantranony ny zanany lahy. Izany tahotra izany dia nanomboka ny fotoana nananan'i Aspas dadatoan'i Cristobar ny zanany lahy handainga momba ny taonany nandritra ny fitsarana Celta. Na izany aza dia nisy fanapahan-kevitra iray natao. Nanaiky hibaboka ny taonan'ny zokiny izy ireo ary nanao fangatahana ho an'ny teknisiana mpanampy mba tsy handà ilay zazalahy kely.
Mahagaga fa tsy nikarakara ny lainga Iago Aspas ny teknisiana akademia Celta. Izany dia noho izy resy lahatra fa nahita fahitana kely tao Iago izy. Araka ny valin'ny fitsapana, i Aspas dia nijanona teo anivon'ireo ankizy hafa izay nifaninana tamin'ny toerana iray mitovy amin'ny taonan'ny marina
Iago Aspas dia nanatevin-daharana ny academy Celta de Vigo tao 1995 fony izy valo taona monja. Tao amin'ny akademia, ny fiainany dia nanamarika ny baolina baolina kitra, izay niaraka taminy na aiza na aiza alehany.
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Fahombiazana amin'ny Aspas
Ny tantara Celta any Iago dia niteraka revolisiona kely kely tao an-tranony. Ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fianakavian'i Aspas dia liana tamin'ny fanandramana fitsapana ary nifindra monina hiaraka amin'i Iago ao Celta. Anisan'ireo rahalahy rehetra, i Jonathan irery ihany no nihaona ny zavatra takiany izay nahita azy handalo fitsapana. Soa ihany fa nanaiky azy i Celta ary samy nandray anjara soa ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Akademia Celta izy roa lahy.
Satria tsy nanana fiara ny ray aman-drenin'i Aspas, dia tsy maintsy nifaneraserany tamin'ny fomba hafa ny fitaovana iray mba hampiofana azy sy ny rahalahiny. Tsy maintsy nizara ny vidin'ny solika izy ireo tamin'ny fanarahana ny vady aman-janany izay nanana fiara.
Tao amin'ny akademia, samy nikarakara azy ireo ny mpirahalahy avy amin'ny teknisiana, izay nandraisan'i Aspas fotoana nihoatra ny taonany.
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Ho tonga Pro
Iago Aspas dia afaka namakivaky ny sokajin'ny Celta. Nahazo ny fampiroboroboana izy tamin'ny alalan'ny sokajin-taona maromaro tao amin'ny akademia. Ny lalao, ny fihetsika, ny fanatsarana sy ny fanamafisana ny dribble dia mampanantena an'i Aspas ho an'ny ho avy.
Tao amin'ny vanim-potoanan'ny 2004-2005, Celta dia tsy maintsy nandefa azy haka an'i Rápido Bouzas izay nahatonga azy ho matihanina ho mpikomy izay vonona ny ho lasa matihanina.
Iago dia nanao ny laharana voalohany tamin'ny ekipa Celta ao amin'ny Celta tamin'ny 2006. Nifindra tany amin'ny seranan'i Celta izy taoriana kelin'ny vanim-potoana roa nijanonany hatramin'ny 2013 talohan'ny niantsoan'i Liverpool.
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Liverpool Misadventures
Tonga tany Angletera i Aspas ary nanantena fa afaka manova ny tontolo iainana izy. Ny olana voalohany dia sarotra ny mianatra teny anglisy. Faharoa dia ny nilalao faharoa an'i Philip Coutinho, Sterling, Sturridge ary Luis Suárez. Aspas koa dia niatrika ny rafitra ambany noho ny mpiara-miasa sy ny kapitenin-dry Steven Gerrard.
Steven Gerrard nanoratra tamin'ny alàlan'ny autobiography azy fa nisalasala momba an'i Aspas sy ny maha-izy azy ho an'ny Premier League. Ity hevitra ity dia tonga rehefa nahita azy voalohany tao amin'ny efitrano fitsangatsanganana Liverpool. Nampitahain'i Gerrard ny nofony tamin'ny "zazalahy kely". Tsy dia fantany loatra fa ny tenany sy i Aspas dia handray anjara amin'ny satroboninahitra voalohan'ny ligy izay very teo an-tànan'ny Manchester City tamin'ny alalan'ny Chelsea.
Iago Aspas dia nanao fitenenana efatra ambinifolo ho an'i Liverpool izay manana tanjona zero. Maharikoriko, tsaroany noho ny toerany tsy misy fanantenana amin'i Chelsea izay nitarika an'i Willian hihodina amin'ny làlana hafa mba handresena.
Ny fahadisoany dia nandrava ny nofinofin'i Liverpool tamin'ny lohateniny. Io hadisoana io dia nahatonga an'i Iago Aspas ho lazaina ho isan'ny mpilalao ratsy indrindra hanehoana an'i Liverpool mandritra ny vanim-potoan'ny Premier League.
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Fahaverezana tany Séville
Sevilla dia nanolotra azy taratasy fisintonana niverina tany Espana saingy tsy niverina tany amin'ny tanindrazany ny fiverenana tany an-tanindrazany.
Tamin'ny 12 June 2015, Sevilla dia nanasonia an'i Aspas avy ao Liverpool ho isan'ny fifanarahana teo amin'ireo klioba anankiroa, avy eo dia namidiny avy hatrany tany Celta tamin'ny andro iray niaraka tamina orinasa sarotra.
Iago Aspas ny fandavana sy fivarotana an'i Seville tao Celta taorian'ny nahatratrarana azy tamin'ny fakantsary nampiasa fitenenana am-bava tamin'ny Unai Emery tao anaty dugout tao anatin'ny iray tamin'ireo lalao.
Hatramin'io fotoana io, indray mandeha dia azo antoka fa i Iago. Tsy maintsy niverina tany amin'ny fakany Celta Vigo izay nanombohan'ny dian'ny baolina kitra.
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Return home
Iago dia nody an-tanindrazana, niverina tany Galicien niaviany ary ny Celta malalany izay noraisin'ireo mpanohana Celta tamin'ny famelabelarany. Raha te hanao ny marina izy, dia tsy nisy fotoana hafa fa ankehitriny.
Talohan'ny lalao voalohany, iago dia nivavaka tamin'ireo andriamanitry ny baolina kitra izay namaly ny vavaka nataony ka nahatonga azy ho boomerala efa tara.
Hatramin'io fotoana io, dia nitsangana tamin'ny fotoana izy mba ho lasa Espagnô ny maty indrindra indrindra.
Iago Aspas dia lasa mamo tanjona ary adala lalina fa handeha hankalaza ny zava-drehetra izy, na dia tsy najanona aza ny fakan-tsary miafina. Voaheloka ho faty izy.
Iago dia nandrombaka ny mpilalao ny La Liga tamin'ny volana oktobra 2016 avy amin'ny maso mahatalanjona Lionel Messi ary Christiano Ronaldo izay tsara indrindra eran-tany. Nahitam-pahombiazana io fahombiazan'ny ekipam-pirenena Espaniôla io.
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Miala ny Liverpool Scars
Iago dia nanamarika ny lahimatoany ho an'i Espana niaraka tamin'ny fisaritahana goavana teo amin'i Angletera tao Wembley. Jereo ny horonantsary etsy ambany;
Araka ny tatitry ny tatitra dia nanao izany izy mba hanaporofoana hevitra iray izay tsy nanamafisany ny tsy fahampiana tamin'ny taona tsy faly tao Liverpool.
Ny fihenan'ny làlan-kizorany manohitra an'i Angletera dia nahita ny lalao baolina kitra izay tonga manodidina azy toy ny antsantsa ary mitady ny tolotr'asany any an-kafa. Na dia teo aza izany, i Aspas dia nanambara fa tsy nikasa ny hanao fahadisoana mitovy izy amin'ny famerenana an'i Celta indray. Izany dia tonga tamin'ny fotoana neken'ny mpankafy Celtan sy Espaniola.
"Faly aho eto, miaraka amin'ny oloko. Eto amin'ny Celta dia miaraka amin'ny zanako lahy aho, ny vadiko, ny ray aman-dreniko ary izany vola izany dia tsy afaka mividy. Nanonofy foana aho hilalao an'i Celta, ary izay no tiako hialana. "
Hatramin'izao fotoana izao, Iago Aspas dia hita ho mahery fo football.
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Relationship Life
Tsy isalasalana fa i Legia Celta Vigo no Iago Aspas. Ny fahaizany milalao sy ny fomba fiainany eo an-tampony dia hanampy anao hanangana sary feno azy. Talohan'ny fialany tao Liverpool sy Seville, i Aspas dia niaraka tamin'ny sipany mahafatifaty sy modely Jennifer Rueda.
Ho toy ny fomba fiteny "Misaotra anao"Noho ny fijanonana niaraka taminy nandritra ireo taona feno fahasahiranana nataony, dia nanolo-tena ny sipany mahafinaritra i Iago ao 2017. Ny fanambarana dia nambara tamin'ny alalan'i Jennifer's Instagram pejy. Taoriana kelin'izay dia nanomboka ny fampakarambadiny.
Talohan'ny fampakaram-badiny, Jennifer Rueda efa bevohoka ny zanany lahy. Tsy maintsy niandry ny fandefasana ny zanany lahy antsoina hoe Thiago ny lanonana. Fivoriana mariazy manokana natao tao Moaña, tanànan'i Iago izany.
Iago sy Jennifer amin'izao fotoana izao dia manana fiainana feno, rehefa miaina ny fifalian'ny ray aman-dreny. Ny fahatongavan'i Thiago sy ny fanantenany zaza iray hafa dia loharanon'ny fahasambarana sy ny avonavona ho an'ny mpivady.
Fifandraisan'ny Ray sy ny Zanaka: Raha ny ray dia tsy modely ho an'ny zanany, iza moa izany ?. Ankoatra ny fikarakarana ny fivoaran'ny fitondran-tena sy ny fitiavan-janany, Iago dia te-hahatonga ny zanany ho lasa mpilalao baolina mahomby kokoa noho izy.
Ny olona rehetra dia mety ho ray. Mitaky olona iray manokana tahaka an'i Iago Aspas ny maha-ray izay handany ny androm-piainany manokana amin'ny fandefasany ny zanany lahy. Thiago dia sady manana ny tanan-drainy no miverina.
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Ny fiainan'ny tena manokana
Iago indray niteny "Mahavariana ny fiainana" raha naneho ny porsche sy Lamborghini tao amin'ny kaonty media sosialy izy. Manana ny iray amin'ireo fiara fitaterana sarobidy indrindra amin'ny sasany amin'ireo anarana lehibe indrindra amin'ny baolina kitra erantany.
Iago dia mahita ny moron-dranon'i Moaña sy ny kianjany. Io tanàna an-dranomasina Espaniôla io dia nitondra lozam-pifaliana taminy.
Food: Niresaka momba ny sakafo i Iago dia tia Pizza avy hatrany tamin'ny andro niainany tany Liverpool.
Tiany ihany koa ny teatra, maka fialantsasatra, mahafinaritra ary mifalifaly amin'ny namana
Iago Aspas tantaram-pitiavana bebe kokoa nohavaozina Biography Facts- Video Summary
Azafady mba jereo eto ambany, ny fijerin'ny lahatsary YouTube ho an'ity profil ity. Fitsidihana amim-pitiavana sy MISORATA ANARANA ho antsika Youtube Channel for More Videos.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pahaterahan'i Iago Aspas momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
vannyhenrico - Aogositra 2, 2018
Jona 18, 2017
vannyhenrico - Jolay 26, 2017
vannyhenrico - Aogositra 19, 2018
vannyhenrico - Desambra 5, 2019
Novambra 30, 2019
Sadio Mane ny tantaram-pitiavam-pitiavan'olon-tsy fantatra bebe kokoa momba ny tantaram-piainana